Home Wararka (Dowladda Qatar) Waa in la baaraa dhalinyarada la qiyaanay ee loo qaaday...
(Dowladda Qatar) Waa in la baaraa dhalinyarada la qiyaanay ee loo qaaday Dagaalada Eriteriya & Itoobiya
Xafiiska Af Hayeenka dowladda Qatar ayaa soo saaray bayaan, isagoo ku baaqaya in baaritaan deg deg ah ay ku sameeyaan masuuliyiinta ay khuseyso arinta ee Somalia & Eriteriya.
“Dowladda Qatar waxay ka soo horjeedaa dhaqamada noocan oo kale ah waxayna ku boorineysaa dhammaan dowladaha inay baaraan xadgudubyada noocaas ah. Dowladda Qatar wuxuu mar kale ku celinayaa in wixii dalab dhab ah ee shaqo ee Qatar ay marwalba ka imaaneyso dariiqyada rasmiga ah iyo wakaaladaha shaqaalaysiinta ee la ansixiyay ama Xarumaha Visa-ha Qatar.
Waxaan ka codsaneynaa dhammaan shaqsiyaadka shaqo doonka ah ee Qatar inay xaqiijiyaan dalab kasta oo ay ka helaan kanaalladaan rasmiga ah ama safaaradda, ka hor aqbalida” ayaa lagu yiri qoraalka.
Wararku waxay intaas ku darayaan in saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ku soo jiiteen rag dhalinyaro ah inay aaminaan inay u shaqo tagayaan magaalada Doha, laakiin markii horeba qorshahoodu wuxuu ahaa in la geeyo dalka Eritrea laguna qasbo inay halkaas ka dagaallamaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed iyo qoysaskoodu wax aqoon ah uma lahan waxa sugaya, weligoodna wax shaqo ah kama aysan oolin Qatar, sidoo kale hay’ado dowladda Qatar ka tirsan, shirkado ama shaqsiyaad toona kama warqabin fadeexadan.
Maqnaanshaha ragga dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed waxay kicisay mudaaharaadyo ka dhacay caasimada Muqdisho, iyo sidoo kale wadanka oo dhan iyada oo si qarsoodi ah loogu qorayo dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyaro ka mid ah xoogaga ka dagaalamaya dalka Eritrea taasoo sabab weyn u ah buuqa dadweynaha.